António Guterres oo Israa’iil ka codsaday inay cunaqabateynta ka qaado Gaza. | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA António Guterres oo Israa’iil ka codsaday inay cunaqabateynta ka qaado Gaza.
António Guterres oo Israa’iil ka codsaday inay cunaqabateynta ka qaado Gaza.
Xoghayayha Guud ee Qaraamada Midoobay António-Guterres ayaa ugu baaqay Xukuumadda Israa’iil inay go’doominta ka qaado Marinka Gaza ee dhulka falastiin ayna hagaajiso duruufta nolasha dadka muwaadiniinta falastiin ee Marinkaasi ku nool.
Shir jaraa’id uu ku qabtay Dugsiga hoose ee Halab magaalada Beit Lahia oo ku yaal waqooyiga Gaza ayaa sheegay in mushukiladda ka taagan Gaza ay u baahan tahay xal caalami ah, wuxuuna falastiin ugu baaqay inay kala qeybsanaanta dhexdooda ka midoobaan.
Xoghayayha Guud ee Qaraamada Midoobay António-Guterres Wuxuu bulshooyinka Caalamka ka codsaday inay taageero bani’aadanimo ah u fidiyaan falastiiniyiinta ku nool magaalada Gaza oo uu qiray inay haysato duruufo aad u adag oo xagga nolashada ah, kadib markii Israa’iil dooc waliba ka gu’doomisay taasoo sanooyin badan saaraneyd Gaza.
Wuxuuna António-Guterres sheeghay inuu aad u jaclaan lahaa inuu mar arko Dowlad falastiin ah oo la jaar ah Israa’iil oo ah laba Dowladooda oo ku wada nool amni,nabadgelyo iyo baraare, waxeyna taa dhaboobi kartaa ayuu yiri” hadii shacabka falastiin ka fogadaan kala qeybsdanaanta dhexdooda ah oo iminka ku dhex jirta” taasoo uu cadeeyey inay qadiyaddooda dhaawacaysa, ayuu intaa raaciyay Xoghayaha guud ee Qaraamada Midoobay.
António-Guterres, intii uu joogay Marinka Gaza, waxa uu la kulmay Caruurta dhigata Dugsiga hoose ee Halab magaalada Beit Lahia iyo haweyn ka mid ah qaxootiga falastiin.
Previous article“DAAWO” Madaxweyne Farmaajo oo dadka Soomaaliyeed ugu Hambalyeeyay Ciida Carafo
Next articleWasiir Xoosh oo ka warbixiyay waxqabadka Wasaaradda Dastuurka Afartii Bilood ee la soo dhaafay